Ngwa Akwụkwọ ikike lọ akwụkwọ nke Illinois - Otu esi enweta ikikere iji ree
Okenye nke Illinois Jiri Cannabis Dispensary
Kedụ ka ị ga-esi nweta akwụkwọ ikike ịhapụ ndị okenye Ọnọdụ Ibelata Cannabis na Illinois?
Ngwa Ndị Ikike Ibe Ọha nke Illinois
Ngwa Ikikere Akwụkwọ ikike Illinois kpuchie nke ọ bụla n'ime ihe iri atọ nke ogo okenye na-eji akwụkwọ ikike ịnwe nzukọ, ma mezue ngwa ahụ site na itinye uche na isi 30 nke steeti Illinois gbara akwụkwọ maka ndị chọrọ ịga akwụkwọ. Ndị otu gị maka Ikenye Illinois ji ikike iziga akwụkwọ ikike dị ezigbo mkpa n'ihi na ọtụtụ akụkụ nke akara ahụ ga-achọ ndị otu dị iche iche, ikekwe tinye ọnụ na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ dị ụkọ. N'ikpeazụ, jide n'aka na ị ga-etinye akwụkwọ maka akwụkwọ ikike ahụ rue Jenụwarị 2, 2020 ma nwee olile anya na ị nwere ihu ọma nke ọma iji nweta nkwado ngwa maka azụju wii wii gị tupu ọnwa Mee nke 2020. Steeti Illinois weputara akwụkwọ anamachọihe ndị ahụ na Ọktọba 1, 2019. Abụọ. A ga-ajụ ajụjụ. Ngwa anamachọihe dị n’etiti Disemba 10, 2019 na Jenụwarị 2, 2020.
Nke a bụ Njikọ Ngwa
Lee otú Ngwa Ikikere Akwụkwọ ikike Illinois na-gbatara:
Kwesịrị ekwesị maka Atụmatụ Ọzụzụ Ndị Ọrụ (Okwu 15)
Nche na Idebe Ihe (Ndekọ 65)
Atụmatụ azụmahịa, ebumnuche, atụmatụ ị na-arụ na mbara ala (65 Isi)
Ihe omuma na ihe omuma nke nkpuru osisi ma obu nkpuru ndi ozo (30 Points)
Ọnọdụ dịka onye ntinye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị (50 Points)
Oru oru na oru (isi ise)
Onye nwe Illinois (5 isi)
Ọnọdụ dịka Veteran (5 isi)
Atụmatụ di iche-iche (5 isi)
Ihe ntarama ego abuo kariri maka mmekorita nke Atụmatụ Uru Obodo
Guo ederede n'ezie nke iwu ijiji mee okenye - - Mmebi Iwu Ahia Ọrịa IllInois
Kedu ihe Iwu Iwu Ọhụụ Ọhụụ Na-ekwu Banyere Cannabis Dispensaries
Ajụjụ: Mgbe enwere ike ndị nwere ikikere cannabis nwere ikikere na Illinois ịmalite ire ere yana mgbe ndị mmadụ ga - ebido ịzụ ahihia n’ụzọ iwu?
A: Jenụwarị 1, 2020
Ọ na-aga n'ekwughị na legalization nke ntụrụndụ na wii wii ọgwụ na Illinois Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-ebute mmụba nke ngwaahịa wii wii. N'ịchọpụta iji hụ na ndị ahịa na-enweta uru maka ego, na ngwaahịa cannabis anaghị adaba n'aka na-ezighi ezi, steeti abịapụtawo iwu dị iche iche iji chịkwa ebe a na-ese wii wii na Illinois.
Ndị chọrọ inyefe ngwaahịa cannabis ga-agbaso iwu. Onye ọ bụla nke na-anaghị arụ ọrụ dịka iwu ga-enweta nsonaazụ siri ike.
N’okpuru, anyị na-ele nkọwa nke ọhụụ Iwu ikike izipu cannabis. Ka anyị banye n'ime, ka ànyị ga-eme ya?
Akwụkwọ ikike Illinois Dispensary Ga-ebuputa Ifuru Cannabis
Dabere na iwu ọhụrụ nke Illinois, a chọrọ inye ndị ọrụ ikikere nke ngwaahịa sitere na ikike ikikere azụmaahịa dị iche iche a na-emepụta maka ire ahịa n'ụlọ ọrụ ọ bụla site na ebe a na-azụ akwụkwọ, ọrụ aka, ma ọ bụ ihe nrụpụta agaghị adị. ihe karịrị 40% nke ngụkọta ngwa ahịa dị maka ọrịre ”.
Nke a ga - apụta na ndị na - azụ ahịa ga - enwe ụdị zuru ezu ịhọrọ site n'otu akwụkwọ. Ọ na - akụda ogige ebe a na - akọ ugbo na ndị ọzọ na - akọ ubi iwu ịmalite ụlọ ebe ha na - edebe ngwa ahịa ha naanị. N’otu akwụkwọ ahụ, amachibidoro ya nri ịhapụ ịchekwa ngwaahịa sitere n'aka ndị ọrụ ubi ma ọ bụ ndị ọrụ ubi nke mejupụtara obere ihe.
Otu ndị na - ejikwa akwụkwọ ikike ikikere akwụkwọ Cannabis ga - agba ọsọ kwa ụbọchị
Agaghị anabata ndị na-anabata Cannabis Akwụkwọ ikike na Illinois ka ha jiri windo draịva rụọ ma ọ bụ nyefee ngwaahịa ngwaahịa ọ bụla na igwe eji ere. A ga-amachibidokwa ịnye ọrụ nnyefe maka ngwaahịa cannabis. A ga-achọ ka ndị niile na - ewepụta ihe ga - enwe ihe nlere anya na ebe akụrụngwa ire. Displọ nyocha ọ bụla kwesịrị inwe mmadụ abụọ na-arụ ọrụ n’oge ọrụ ya.
Ọ bụ ezie na ndị na-enye ego nwere ọtụtụ ngwaahịa cannabis na ngwaahịa, agaghị ekwe ka ha “Rere clones ma ọ bụ ihe ọkụkụ ọ bụla ọzọ dị ndụ”. Na mgbakwunye, a ga-ere ngwaahịa niile n'otu n'otu, ma ghara ịchikọta ọnụ maka otu ọnụahịa. Ngwaahịa ọ bụla “ga-amata ọnụọgụ na ọnụahịa na nnata”.
Obere ihe banyere ndị okenye na-eji ndị na-ahụ maka ndị ọrụ Cannabis na Illinois
Ekwesịrị ịzụ ndị ọrụ ikikere Cannabis nwere ikike ọzụzụ na iwu cannabis yana usoro etinyebere iji hụ na nchekwa. Usoro nchekwa dị otú ahụ gụnyere idebe akwụkwọ kwesịrị ekwesị, nchekwa iji gbochie izu ohi ngwaahịa cannabis, yana atụmatụ na-achịkwa oke ahịa ruo mgbe erere ha.
Iwu ahụ kwuru na ngalaba ụlọ ọrụ ọ bụla ga-enwerịrị atụmatụ zuru ezu yana “atụmatụ nchekwa ahụ ga-akọwakwa nke ndị ọrụ nkwekọrịta nchekwa nke nyere ikike n'okpuru Nkebi nke 10-5 nke Nkeonwe Nchọpụta, Nkeonwe Mkpuchi, Nchebe Onwe Mbepụ, Mkpịsị aka mkpịsị aka, na Locksmith Act nke 2004”. nye nchekwa na ogige ulo.
Atụmatụ azụmaahịa a na-ewepụta ga-enwe ezigbo nkọwa banyere etu a ga-esi dozie ụlọ ahịa na obere oge ma n'ikpeazụ. "Atụmatụ ọrụ a ga-agụnye, opekata mpe, omume kacha mma maka ụbọchị inye ndị ọrịa ụgwọ ọrụ ụbọchị yana inye ndị ọrụ ọrụ".
The Illinois Adult Use cannabis dispensaries A ga-achọkwa ka o kwuopụta etu o si ezube ịgwọ ndị ọrụ ya. A ga-enyekwu isi ihe n ’ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịnye usoro ka mma na ọnọdụ gburugburu ebe obibi maka ndị ọrụ ya niile.
Usoro nchịkwa ndị okenye nwere ikikere nke Ikike Illinois Jiri Mmechi Mmefu Cannabis
A ga-achọrọ ndị niile na - emegharị akwụkwọ ozi ga - eme ka ụlọ ọrụ na - enye ikikere ngwa ngwa pụta ma ọ bụrụ na ha achọghị imeghari ikike ọrụ ha. Ogologo oge enyere ọkwa maka nke a, opekata mpe ọnwa atọ tupu ụbọchị emechi.
A ga-achọrọ ndị na-ewepụta akwụkwọ ga-arụ ọrụ na ngalaba ikikere iji wepụta atụmatụ mmechi. Atụmatụ a '' adresị, opekata mpe, ịbufe ihe ndekọ azụmaahịa, ịnyefe ngwaahịa cannabis, na ihe ọ bụla ọzọ nke Ngalaba hụrụ na ọ dị mkpa '.
Iwu nke Illinois Cannabis Dispensaries
Iwu obodo, ndị uwe ojii, na ngalaba ikikere ga-enwe ikike ịme nyocha na-enweghị ọkwa na ngalaba mkpesa cannabis ọ bụla na steeti. Na mgbakwunye, ndị ọrụ mmanye iwu ga-enwe ikike ịnweta ngwaahịa, ihe, na ndekọ ọ bụla cannabis.
Ọ bụrụ na enwere ebubo ọ bụla ebe a na-enyo enyo na ọ mebiri iwu, ngalaba ahụ nwere ike ịme nyocha nke onye 'anamachọ, nkọwa ngwa, ngalaba na-ekesa, onye isi, onye nnọchi anya, onye na-ere ahịa nke atọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ metụtara. ya na nzukọ na-ekesa akwụkwọ. ”
Ntaramahụhụ nke Illinois Cannabis Dispensaries maka Emeghị Iwu
Dabere na Iwu Illinois Cannabis ọhụrụ, "Ngalaba ahụ nwere ike ịnye okwu ntụnye maka obere mmebi". Ihe nkwupụta ndị a nwere ike ịnwe ntaramahụhụ enweghị ike ịfe $ 20,000 maka mmebi ọ bụla. A ga-akwụ onye na-ahụ maka ikike iwepụ akwụkwọ ikike ahụ. Onye na-ahụ maka ikikere nwere ike ịrịọ maka nge ntị n'ime ụbọchị 30 kemgbe ụbọchị enyere ọrụ aka ahụ. Ozugbo oge a gafere, aka ga-abụ nke ikpeazụ na-agaghị agbagha.
Iwu ahụ doro anya na ngalaba ikikere nwere ike, "gọnarị iwepụta akwụkwọ, jụ iweghachi ma ọ bụ weghachi, ịba mba, tinye ya na probation, kwụsịtụ, kagbuo, ma ọ bụ were usoro iwu ma ọ bụ nwebe iwu megide ikikere ọ bụla". Offọdụ n'ime ụzọ nkesa ga-esi mebie iwu gụnyere:
Ozi ezighi ezi nke ezigara na ngalaba ikikere
Inweta ikike wii wii site n'uzo ojoo
Thatkpụrụ na-egosi erughị eru n'ụzọ nke ngalaba izisa azụmahịa ha
Imebi cannabis na-eme ihe na iwu
Aging na-akpa agwa ọjọọ nwere ike na-emebi ọha na eze. Onye ọ bụla sitere na ọha na eze nwere ike ịkọ akụkọ ọ bụla na-adịghị mma site na ngalaba, na ndị ọrụ mmanye iwu ga-eme ike ha iji nyochaa nkwupụta ahụ.
Ngalaba ahụ nwekwara ike ịhọrọ ịkwụsịtụ ọrụ nke nkesa ọrụ. Mgbe enyechara ọkwa nkwusioru, onye nyere ya ikike ịrịọ maka ịnụ ihe n'ime ụbọchị iri anọ na anọ. Ọ bụrụ na ngalaba ahụ anaghị asọpụrụ arịrịọ a, a na-ewepụtaghachi akwụkwọ ikike a na-akpaghị aka ozugbo ụbọchị iri anọ na ise gafere.
Kedụ ihe ndị achọrọ iji malite ịbelata akwụkwọ ikike izizi akwụkwọ ikike na Illinois?
Ewezuga inweta ikikere oru, enwere ihe ndi ozo a choro ka ndi choro iguzoputa ihe ga enye aka mezue ya. Offọdụ n'ime ihe ndị a chọrọ:
Ndị isi ụlọ ọrụ agha kwesịrị igosipụta na ha maara maka ngwaahịa ngwaahịa cannabis dị iche iche ha na-eme atụmatụ inye
Kwesịrị inwe atụmatụ azụmaahịa zuru oke nke na-egosi na aga-agba ụgwọ gafee dịka iwu si dị.
Ndị na-achọ ntinye ego na-elekọta mmadụ ga-enweta ihe ruru 50 ma ọ bụrụ na ha nwere ike igosipụta na ha ruru ihe achọrọ maka ụdị a. Ndị na-achọ inweta ego na-elekọta mmadụ nwere ike iru eru maka ego sitere na kitty wepụtara iji kwado azụmahịa azụta.
Kechie akwụkwọ anamachọihe nke ndị okenye nọ na Ọnọdụ Igosipụta Izu Ike na Ọnọdụ
Ebe ị nwere ya! Mmebi nke iwu ohuru nke cannabis ọhụrụ nke ga-achịkwa nkesa marijuana na-abịa na Jenụwarị 2020. Ọ bụ ezie na iwu ndị a pụtara akwụkwọ ikike, ha na-echebe ndị niile metụtara ụlọ ọrụ wii wii, gụnyere ndị nwe ya na ndị na-ere wii wii.
Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịmalite izizi cannabis, ị kwesịrị ịgakwuru onye ọka iwu nwere ahụmahụ iji nyere gị aka ịghọta iwu ma duzie gị na akwụkwọ ikike ikike izisa akwụkwọ ikike na Illinois.
Akwụkwọ anamachọihe nke Ikike Illinois
Lee ederede site na vidiyo & pọdkastị;
Welcome, Abụ m Tom - chọta m site na ịgbaso onye ọka iwu Cannabis, wee pịa ebe nrụọrụ weebụ m, cannabis ụlọ ọrụ ọka iwu.com. Ihe ntanetị maka ajụjụ gị niile gbasara ịnyagharị ụlọ ọrụ cannabis - dị ka isiokwu a ma ama nke ọma na Illinois - akwụkwọ ikike ọhụrụ. Anyị na-aga na-ekpuchi ngwa ndị ga-eme ka ihe ruru mmadụ 500 ọhụrụ banye na ahịa Cannabis nke Illinois Cannabis n'afọ na-abịanụ.
Iji nyere ndị mmadụ aka ịchọpụta ozi a banyere otu esi enweta akwụkwọ ikike iji okenye na-ekesa akwụkwọ ikike (ma ọ bụ ya bụ aha n'ezie) n'okpuru ngalaba 15-25 nke Iwu Iwu Okenye Ọhụrụ nke Illinois - imebisi ihe na-amasị gi ma banye na ndenye aha. Anyị ga-eme ọ bụghị naanị ikpuchi ngwa ahụ, kamakwa otu esi agba ya iji bulie ohere gị nke ịbụ ndị a họọrọ. Ikikere Ikosi Ike nke Illinois Jiri Cannabis Dispensary.
Jide n'aka na ị ga-elele ruo mgbe ọgwụgwụ n'ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka m ga-agwa gị mmadụ ole ga-emepe emepe maka azụmahịa na Jenụwarị 1, 2020. - ụdị 2 n'ime ha dị.
Ma ugbu a ihe niile ị chọrọ ime iji nweta ọnọdụ okenye gị nwere ikike iwere akwụkwọ ikike na Illinois.
Ngalaba Ọrụ Ugbo ga-abụ iwu - wepụta akwụkwọ ikike ikikere ọhụrụ nke abalị site na July 75, 1. Ọzọkwa site na december 21, 2021, ngalaba ọrụ ubi ga-ewepụta akwụkwọ ikike 110 maka okenye tozuru etozu iji nyefee akwụkwọ ikike izizi akwụkwọ. Ka onwa Jenụwarị 1, 2022 gasịrị, ọnọdụ nke ndị na - enye ndị ọbịa nsogbu na - adịgide karịa - mana ha enweghị ike ịfefe narị ndị ọbịa ọhụrụ 500 na steeti ahụ. Ọ gwụla ma achọrọ nnweta ọzọ. Ndị ọzọ na nke ahụ na vidiyo ndị ọzọ.
Yabụ, ka anyị kwuo maka ihe ga-abanye na akwụkwọ ikike ahụ maka izizi nke okenye na-eji ohere izizi ihe okenye.
Nke mbu - iwu kwuru maka ikesa mpaghara di na mpaghara. Nke a bụ ndepụta nke onye na-enweta ihe mbụ ebili mmiri - ikekwe ị ga - ahụ onye na - apụta ma ọ bụ abụọ, gịnị kpatara na Bloomington na - enweta otu mgbe peoria na - enweta 3 - anyị dị jụụ karịa ndị ahịa mkpuchi ahụ - na n'ezie mpaghara chicago na - enweta 47.
Na-agbada n'ahịrị na Nkebi 15-25 - anyị abịarute chọrọ maka ngwa ahụ. Tupu anyị agafee nke ahụ - biko dị njikere ilele ndị a site na oghere nke otu esi eme akara ngwa ahụ. Ya mere - anyị na-amalite na Nkebi nke 15-30 (c) nke iwu cannabis.
A ga-akwụnye akara iri abụọ na abụọ maka ngwa zuru ezu - ma steeti họpụtara ndị meriri. Nke a bụ nnukwu ihe - Nche na Idebe Isi 65. Nke ahụ ziri ezi karịa 25% nke isi ihe gị sitere na nchekwa na idekọ ndekọ - ahụla m ụfọdụ ndekọ ndị ahịa, kedu ka ndekọ gị dị mma - Jeffery si dị mma? Nwoke ahụ aha ya bụ Jeffery na-ele ihe a - enwere m olileanya na m tọpụrụ gị.
Dị nnọọ mkpa dị ka Idebe nchekwa & Ndekọ bụ Plasmaahịa, ancizụ Ewu, Atụmatụ na atụmatụ ala - 65 isi. Anyị ga na-eme vidiyo na ụfọdụ ndị na-enye ọrụ ndị a na akụkọ mmebe iwu cannabis anyị - yabụ pịa bọtịnụ ndenye aha ka ịbanye na nke ahụ, ọ bụrụ na ị nọ na ụlọ ọrụ nwere ihe ọmụma banyere isi ihe ndị a - nweere onwe gị ileta m na ụlọ ọrụ cannabis. onye ọka iwu ma nye m oku.
Yabụ ugbu a na karịa 50% nke akara ndị enyere ikikere maka ndị okenye Illinois iji ikike ikikere Cannabis, anyị na-atụgharị n'ihe kachasị mkpa na ngwa gị. Ọnọdụ itinye ego mmekọrịta mmadụ na ibe ya - tụle vidio anyị maka ọdịda a. Ọ bara uru isi iri ise. Anyi ekwuola na cannabis bụ egwuregwu otu na nnukwu onye otu otu na ọgụ ahịa wii wii nke Illinois bụ uru mmekọrịta ọha na eze - 50%
Ọzọ, anyị na-aga 30 ihe maka Ihe Ọmụma na Ahụmahụ na thelọ ọrụ - ọ dị mkpa n'ihi na ogo ngwaahịa dị na steeti ahụ emeela nke ọma na afọ abụọ gara aga na enwetara m kaadi m na ụfọdụ ndị na - emepụta ihe ndị dị mma na - apụbeghị ugbu a - echere m na nka ga - eweta ọtụtụ - yana enwere ụfọdụ overlap n’etiti nkawa na etolite ya mere choo ihe a.
Tupu anyị erute ihe dị iche iche, akụkụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ikpeazụ bụ Atụmatụ Ọzụzụ Ndị Ọrụ - bara uru isi 15. A choro nke a n'okpuru ntinye - yana otu n'ime ihe kpatara ha ga-eji dị oke ọnụ itinye ọnụ. Cheta ịzụta ndị ọrụ ịghọta iwu na iwu - mee ka m mara ma ịchọrọ enyemaka ụfọdụ na amụma ndị ahụ.
Ọ dị mma. ka anyị hụ - ugboro 60 + 2 + 50 + 30 + 15 = 215, ya mere ana m akpọ isi ihe iri atọ na ise fọdụrụ.
Oru oru na oru: 5 isi
Atụmatụ gburugburu ebe obibi - 5 isi
Onye nwe Illinois (51%) - 5 isi
Veteran nwere 51% - 5 isi
Atụmatụ di iche-iche - isi ise na okwu puku abụọ na narị ise
N’ebe ị gara 250 isi - mana ihe nara ego maka onyinye abụọ ka enyere atụmatụ iji soro ndị obodo mee ihe - 2 max. Nwere olile-anya na ị ga-enweta ha niile.
Kama ịgafe ihe iri atọ ọ bụla nke ikike iji ihe na - eme ihe okenye - m chọrọ ịkwụsị vidiyo a n’okpuru nkeji iri ka m nwee ike biputere ya na Linked'in na edemede a dịka “isiokwu” nke ha masịrị - ọ bụ usoro dị iche karịa nke youtube - mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso m na njikọta na profaịlụ m nwere njikọ na nkọwa ahụ.
Otu ihe na - esighi na ihe iri atọ ahụ - adreesị - ọ bụrụ na ịhọrọ gị, ị nwere ọnwa 30 iji nye steeti gị adreesị gị.
Ugbu a, mmadụ ole ga-emepe emepe tupu Jenụwarị 1? N’agbata 55 na 110. Ndị na-ahụ maka ọgwụ ugbu a 55 nwere nhọrọ imeghe maka iji okenye & ọbụlagodi ọnọdụ nke abụọ. Enweghị m ike ichere ịhụ ọnụ ọgụgụ ndị na-abịa na Jenụwarị.
Ezigbo akara ọma na akwụkwọ ikike ikike ị nweta akwụkwọ Cannabis nke Illinois
Idenye aha na Cannabis Legalization News Ebe a.